जीवाश्म ईन्धन: तिनीहरू के हुन्, उदाहरण र फाइदाहरू र नोक्सानहरू हरियो नवीकरणीय
जीवाश्म ईन्धन तिनीहरू ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुन् जुन हामी संसारभरि पाउँछौं। यो पृथ्वीमा अवस्थित जीवाणुहरूका अवशेषहरूको समूह हो र पृथ्वीको क्रस्टको ताप र दबाबको सिकार भए पछि सयौं लाखौं वर्षसम्म यसको गठन भयो र यसले ठूलो मात्रामा उर्जा समावेश गरेको छ। यसको गठन मृत र गाडिएका जीवहरूको एरोबिक अपघटनको प्राकृतिक प्रक्रियाको कारण हो। वर्षौंको अवधिमा, यो सड्न ऊर्जाको लागि सक्षम हाइड्रोकार्बन बनेको छ।
यस लेखमा हामी जीवाश्म ईन्धनको विशेषताहरु, अनुप्रयोगहरु, उत्पत्ति र माध्यमिक प्रभावहरु बयान गर्न मा केन्द्रित गर्दैछौं। के तपाई तिनीहरूको बारे सबै जान्न चाहानुहुन्छ?
1 जीवाश्म ईन्धन उर्जा स्रोतको रूपमा
2 जीवाश्म ईन्धनको प्रकार
3 तेल गठन
4 लाभ र हानि
4.1 वातावरणीय बेफाइदाहरू
4.2 स्वास्थ्य प्रभावहरू
जीवाश्म ईन्धन उर्जा स्रोतको रूपमा
हाम्रो संसार लगातार परिवर्तन भइरहेको छ। औद्योगिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने आर्थिक विकासले हाम्रो समाजलाई विकसित गर्दैछ। एक पूर्ण औद्योगिक समाज जहाँ आर्थिक विकास उर्जा स्रोतहरु संग जोडिएको छ।
सबै गतिविधिहरू पूरा गर्न मानवले दिनहुँ उपभोग गर्ने उर्जा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरिन्छ। ती मध्ये केही छन् नवीकरणीय स्रोतहरू र अरु होइन। अहिलेको लागि, हाम्रो संसारमा छिर्दै छ अधिकतर गैर-नवीकरणीय उर्जाहरूको साथ जुन ग्रहलाई प्रदूषित गर्दछ।
जीवाश्म उर्जा केही पदार्थहरूको दहनको माध्यमबाट प्राप्त हुन्छ जुन बोटबिरुवाका अवशेषहरू र अन्य जीवित जीवहरूबाट आउँदछ जुन वर्षौंको बखत भइरहेको छ। लाखौं वर्ष पहिले, यी अवशेषहरू प्राकृतिक घटनाको प्रभाव र सूक्ष्मजीवहरूको क्रियाले गाडिदिएका थिए। एक पटक जब उनीहरूलाई पृथ्वीको क्रस्टमा गाडियो, तिनीहरू दबाब र उच्च तापक्रमको सर्तहरूमा प्रतिबद्ध थिए जसले उनीहरूलाई उनीहरूको हालका विशेषताहरू दिएका छन्।
जीवाश्म ईन्धनको प्रकार
हाल, ऊर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येकको विभिन्न विशेषता र उत्पत्ति हुन्छ। यद्यपि तिनीहरू सबैमा ठूलो मात्रामा उर्जा हुन्छ जुन बिभिन्न प्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
अब हामी मुख्यलाई वर्णन गर्नेछौं:
खनिज कार्बन यो कोइला भनेको लोकोमोटिभको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। यो मुख्यत: जमिनमा ठूलो भण्डारमा कार्बन पाइन्छ। यसलाई निकाल्न, खानहरू निर्माण गरिन्छ जहाँ स्रोतको शोषण हुन्छ।
पेट्रोलियम। यो तरल चरणमा विभिन्न प्रकारका हाइड्रोकार्बनको मिश्रण हो। यो अन्य ठूलो अशुद्धताहरु मिलेर बनेको छ र विभिन्न ईन्धन र उप-उत्पादनहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
प्राकृतिक ग्यास। यो मुख्यतया मीथेन ग्यासले बनेको हुन्छ। यो ग्यास हाइड्रोकार्बनको हल्का अंशसँग मिल्छ। त्यसकारण, यो भनिन्छ कि प्राकृतिक ग्यास कम प्रदूषणकारी र बढी शुद्ध छ। यो ग्यासको रूपमा तेल क्षेत्रबाट निकालिन्छ।
टार बालुवा र तेल को शेल्स। ती सामग्रीहरू माटोको आकारका बालुवाहरूले बनाएका सामग्री हुन् जसले जैविक पदार्थको सानो अवशेष समावेश गर्दछ। यो जैविक पदार्थ तेलको जस्तै संरचनासँग विघटित सामग्रीबाट बनेको छ।
आणविक ऊर्जालाई पनि एक प्रकारको जीवाश्म ईन्धन मानिन्छ। यो भनिन्छ एक आणविक प्रतिक्रिया को परिणाम को रूपमा जारी गरिएको छ आणविक दर्शन। यो युरेनियम वा प्लुटोनियम जस्ता भारी परमाणुहरूको केन्द्रकको भाग हो।
पेट्रोलियम जीवाश्म ईन्धन हो जुन जीवित जलजीव, जनावर र वनस्पति जीवहरूको मलबे फिडस्टकबाट उत्पत्ति हुन्छ। यी जीवित प्राणीहरू समुद्रको छेउमा समुद्र, खाँबो र मुखमा बस्थे।
तेल भित्र छ तलछट उत्पत्ति को ती मिडिया। यसको मतलव यो हो कि बनिएको पदार्थ जैविक थियो र यसलाई तलछो द्वारा ढाकिएको थियो। गहिरो र गहिरो, पृथ्वीको क्रस्टको दबाबको कार्यद्वारा, यो एक हाइड्रोकार्बनमा परिणत भयो।
यस प्रक्रियालाई समय मा लाखौं वर्ष लाग्छ। तसर्थ, तेल लगातार उत्पादन भइरहेको छ, जबकि यो मानव मापन को एक माइनर दर मा त्यसो गर्दैछ। यसबाहेक, तेल खपतको दर यस्तो छ कि यसको ह्रासका लागि मितिहरू पहिले नै निर्धारित गरिएको छ। तेल गठन प्रतिक्रियामा, एरोबिक ब्याक्टेरियाहरूले पहिले कार्य गर्दछ र anaerobic ब्याक्टेरिया पछि, अधिक गहिराईमा। यी प्रतिक्रियाहरूले अक्सिजन, नाइट्रोजन र सल्फर छोड्छ। यी तीन तत्वहरू हाइड्रोकार्बनको अस्थिर यौगिकहरूको अंश हुन्।
जसै तलछटहरू दबाबको प्रभावले कम्प्याक्ट हुन्छ, बेडरोक गठन हुन्छ। त्यस पछि, माइग्रेसन प्रभावको कारण, तेलले अधिक झरझराउन र अधिक पारगम्य चट्टानहरूको गर्भधारण गर्न थाल्छ। यी चट्टानहरू बोलाइएको छ "गोदाम चट्टानहरू।" त्यहाँ तेल केन्द्रित हुन्छ र तिनीहरूमा रहन्छ। यस तरीकाले, तेल निकाल्ने प्रक्रियाहरू यसको शोषणको लागि ईन्धनको रूपमा गरिन्छ।
जीवाश्म ईन्धनको धेरै फाइदा र हानिहरू हुन्छन् जब यो उर्जा स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न आउँदछ। तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्नुहोस्:
निक्षेपमा प्रचुर मात्रामा। यद्यपि यसको अर्को गिरावटको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, जीवाश्म ईन्धनको भण्डारले हामीलाई अझै आपूर्ति गर्न बाँकी छ। नवीकरणीय उर्जाको बृद्धिसँग यसको प्रयोग दिन प्रतिदिन घट्दै छ।
भण्डारहरूको पहुँच अझै धेरै जटिल छैन। यसको मतलब यो कि निकाल्नको लागि सजिलो हुँदैमा आर्थिक अपरेटिंग लागतहरू कम भएका छन्।
एक अपेक्षाकृत कम मूल्यमा धेरै शक्ति प्रदान गर्दछ। यो भन्नु पर्दछ कि, यद्यपि तिनीहरू लामो अवधिको लागि उपयोगी छैनन्, तिनीहरू दृढ र सस्तो ऊर्जा हुन्।
यसको यातायात र भण्डारण सस्तो र सजिलो छ। नवीकरणीय ऊर्जाको विपरीत, जीवाश्म ईन्धनहरूको ढुवानी र भण्डारण सजिलो छ। नविकरणकर्ताहरूको आफ्नो कमजोरीहरू हुन्छन् भण्डारण प्रणाली.
बेफाइदहरू व्यापक छन् किनकि तिनीहरू धेरै प्रकारहरूमा विभाजित छन्। हामी ती बारे केही अंशमा छलफल गर्नेछौं।
यी जीवाश्म ईन्धनहरूको दहन, निकासी, प्रशोधन र यातायातको प्रत्यक्ष परिणाम ग्रीनहाउस प्रभावमा पर्दछ। लगभग कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको %०% विश्वव्यापी रूपमा तिनीहरू जीवाश्म ईन्धनको प्रयोगबाट आएका हुन्।
जनसंख्या प्रदूषणबाट प्रभावित छ र श्वासप्रश्वास र हृदय रोगहरूले ग्रस्त छ। जनसंख्याको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरू गर्भवती महिला, बुढा र बच्चाहरू हुन्। बच्चाहरू विशेष रूपमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, किनकि जब तपाईं खेल्नुहुन्छ अधिक दौडेर उनीहरूले बढी हावा सास फेर्छन् र बढी पानी पिउँदछन्। तपाईको मेटाबोलिजम अझै हानिकारक पदार्थहरूलाई हटाउनको लागि पर्याप्त विकसित भएको छैन।
आशा गर्नुहोस् कि नवीकरणीय उर्जाहरूले जीवाश्म ईन्धनहरू प्रतिस्थापन गर्दछ र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » परम्परागत ऊर्जा » जीवाश्म ईन्धन
GUADALUPE गोमेज हेरनाडेज भन्यो
तपाइँको वातावरणमा तपाइँको विषयको लागि धन्यवाद आईटी धेरै नै विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ।
GUADALUPE Gomez HERNANDEZ लाई जवाफ दिनुहोस्